काखे छोरा लिएर बसमै ज्यान गुमाएकी धर्माकुमारीको कहाली-लाग्दो मृ`त्यु (भिडियो सहित)
August 22, 2021 8371
सामाजिक संजालमा मृ त आमाको काखमा शान्त रहेर सुतिरहेको एक बालकको तस्वीर यतिखेर भाइर`ल बनेको छ । जसले आम मानिसलाई भावु`क बनाएको छ । उक्त तस्वीर हो, रुकुम`पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका- ९ की २८ वर्षीया धर्माकुमारी बटाला र उनका ३२ महिने छोराकाे ।
बिहीबार यात्राको क्रममा धर्माकुमारीको बसमै निध`न भएकाे थियाे । त्यसपछि काखमा रहेकाे उनको छोरा बसकाे सिटबाट खसेर रोए`पछि मात्रै बसका अन्य यात्रुहरुले थाहा पाए|छन्, उनी मृ`त भइसकिन् भनेर । स्थानीयका अनुसार उनी लामो समयबाट मुटुको समस्या`ले ग्रसि`त थिइन् ।
उनले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचा`र गराए पनि सन्चो नभ`एपछि श्रीमानसँग सल्लाह`मै उपचा`रको लागि नेपालगञ्ज जाने निर्णय गरेकी थिइन् । उनका श्रीमान नेपालगन्ज`मर् कार्यरत रहेकाे बता`इएकाे छ ।
सोही अनुसार उनी बिहीबार राति बस चढेर नेपालगञ्ज`तर्फ हिँडिन् । काखमा ३२ महिनाको छोरा थियाे । छाेरा`लाइ छाडेर जाने अवस्था नभएपछि काखमै बाेकेर हिँडिन् ।
उनका श्रीमान दलबहादुर बटाला नेपालगञ्जमै ठेका`पट्टाको काम गर्दै आएकाले उनकाे उप`चारको लागि बोलाएका थिए । स्थानीय`का अनुसार श्रीमान बाहिरै भए|काले घरको सबै व्यव`स्थापन गरेर घर रेख|देख गर्ने जिम्मा छिमेकीलाई दिइएको थियो ।
यात्राकै क्रममा पटक-पटक श्रीमान्-श्रीमती`बीच कुराका`नी भएको थियो । उनले श्रीमानलाई आफ्नो अवस्था सामान्य भएको बताउँदै आएकी थिइन् । तर यात्राका क्रममै उनले असहज भएको भनेपछि बसका स्टाफले दोस्रो सिटमा ल्याएर बच्चासँ|गै राखेका थिए । यात्राकै क्रममा छिप्पिँदो रातसँगै उनकाे प्राण गएछ ।
त्यसपछि मृत`ककाे काखकाे बच्चा सिट`बाट झरेर राेए`छ । हेर्दा उनको निध`न भएको पाइएपछि अन्य यात्रुहरु अत्ता`लिएका थिए । बच्चा रोइक`राइ गरेपछि फकाउनका लागि मृ`त आमाकै काखमा राखिएको थियो । उक्त भावुक तस्बीर अहिले सामाजिक संजालमा भाइ|रल बनेको हाे ।
बस नेपालगञ्ज पुर्याइए`पछि श्रीमान दल`बहादुरले जिवित हुने आशामा विभन्न अस्प|ताल पुर्याएका थिए । तर चिकित्सकहरुले धर्माकुमारीलाई मृ|त घोषणा गरेका थिए । दलबहादुरले पहिलाको श्रीम|तीले छोडेपछि धर्माकु`मारीलाई दो`स्रो बिहे गरेर ल्याएका थिए ।
Prev“बखते”को अन्तिम बिदाइमा सबैको रुवाबासि , कलाकार पुगे पशुपतिमा (हे`र्नुस् भिडियो )
Nextभक्तपुरको एक होटलमा बिल धेरै उठाएको भन्दै होटलमै ग्राहकले बमजस्तो वस्तु राखिदिए !
अमेरिकी जानको लागि डिभी चिट्ठा खुल्यो, यसरी भर्नुहोस् डीभी….
भोलि साउन ७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आँचल शर्मालाई बच्चा कहिले जन्माउने ? भनेर सोधेपछि पत्रकारले पाए आँचलको यस्तो जवाफ (भिडियो सहित)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (100068)